कालिमाटी तरकारी बजारमा किन चल्यो बुलडोजर... — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उद्योग > कालिमाटी तरकारी बजारमा किन चल्यो बुलडोजर…
कालिमाटी तरकारी बजारमा किन चल्यो बुलडोजर…
काठमाडौ । कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिमा आईतबार एक्कासी बुलडोजर चल्यो ।
बजार परिसरमा निलो ड्रेसमा सजिएका प्रहरीको ठूलो संख्या, सेता ड्रेसमा सजिएका बजार विकास समितिका प्रतिनिधि, पत्रकारहरु, व्यवसायीक संघसंस्थाका प्रतिनिधि त्यहाँ रमिते बनेर हेरिरहेका थिए ।
बुलडोजर आफ्नै गतिमा चलिरहेको थियो ।
कोही तरकारी बजारको छानोमा बसेर जस्ता, टिनहरु निकाल्दै थिए । पसलका अन्य संरचना धमाधम भकाईरहेका थिए । कोहि बजारको बाटो छेउछाउमा टिन र पालले बेरिएका पसलहरु हटाईरहेका थिए । कुरो के रहेछ ? हामी बुझ्दै गयौं ।
जब हामी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेल कहाँ पुग्यौं अनि बल्ल थाहा भयो बजारमा विभिन्न ८ वटा स्थलमा टहरा, पसल बनाएर व्यवसायीहरु स्थान अतिक्रमण गरेर बसेका रहेछन् । अनि बुलडोजर चलेको रहेछ । पौडेलका अनुसार, यो कालीमाटी बजार सुधार अभियान जसको थालनी आजबाट भईरहेको छ । उनी भन्दै थिए, ʽयहाँभित्र भएका अव्यवस्थित बनेका बजारलाई व्यवस्थित गर्न लागेका हौं । बजार विकास समिति सँग सम्झौता नगरिएका र अनधिकृत रुपमा कब्जा गरि संरचना तयार गरि बसेका व्यवसायलाई हामी खाली गराउँछौं । बजार लथालिङग महशुस हुन थालेपछि विभिन्न चरणको छलफल पछि सबैको सहमतिमा बजार व्यवस्थित गर्न समितिको नियन्त्रण बाहिरका संरचना हटाएर सुरुवात गरियो ।ʼ
यो विषयमा आफुलाई पिडीत बताउने आलु प्याजको व्यापार गर्दै आएका सुरेन्द्र श्रेष्ठ भने आफुहरुको समस्या सुनुवाई गर्ने यो बजारमा कोहि पनि नभए पछि बाध्य भएर अनियमितरुपमा बस्दै आएको स्विकार गरे । उनको भनाई अनुसार बजारमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
समितिले निर्धारण गरेको भन्दा बाहिर पसल व्यवसाय संचालन गर्न पाईदैन भन्दै समितिका उप–कार्यकारी निर्देशक विनय श्रेष्ठ भन्दै थिए हामीले ११ वटा बुँदामा कालिमाटी तरकारी बजारलाई सुधार गर्नेर्छाैं ।
–स्थान अतिक्रमण गर्ने काम बन्द गर्ने ।
–अतिक्रमित संरचनालाई हटाउने ।
–सरसफाई गर्ने ।
–सडक पेटीमा सामान राखेर बिक्री गर्नेलाई हटाउने ।
–निर्धारित स्थान भन्दा बाहिर सामान बिक्री गर्नेलाई हटाउने ।
–कृषकलाई छुट्याईको ठाउँमा व्यवसायीले गरिरहेको बिक्री वितरण बन्द गर्ने ।
–गैर कृषक आएर बिक्री गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने । आदि ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो कालिमाटि तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समिति अन्तर्गत इजाजत लिएर साँढे ५ सय व्यवसायीले कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यस्तै बजारमा दैनिक औसत ६ सय टन तरकारीको कारोबार हुँदै आएको छ ।
प्रकाशित मिति ः २०७३ साउन ९
२०७३ साउन १० गते ०६:२६ मा प्रकाशित
गाडी चढ्दा हैरानी भयो या ट्याक्सीले ठग्यो, अब गर्नुहोस् एसएमएस !
सगरमाथा फाइनान्सले पनि पायो साढे २९ लाख सेयर निस्कासनको अनुमति !
स्टुडेण्टका लागि हेलो स्टुडेण्ट एजुकेशन कन्शल्टेन्सी खुल्यो
जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक विस्तारको काम सुरु
संस्थाको जग्गा नियम विपरित करोडौमा बिक्री, कारबाही गर्न माग
सार्क सम्मेलनका नाममा भ्रष्टाचार